တနင်္သာရီဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မဲဆွယ်အပြုံး အမည်ရှိတဲ့ သရော်စာကို တွေ့ရစဉ်
Photo: Dawei Watch
ထားဝယ်အခြေစိုက် တနင်္သာရီဂျာနယ်ကို မီဒီယာဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ (ခ)နဲ့ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က စွဲဆိုထားတဲ့အမှုကို ဒီနေ့ ထားဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ နဲ့ အာမခံပေးလိုက်တယ်လို့ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမျိုးအောင် က ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ ထားဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ပထမဆုံးဆင့်ခေါ်တာကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို တနင်္သာရီ ဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးမျိုးအောင် က ပြောပါတယ်။
"တရားရုံးချိန်းသွားတယ်။ အဲဒီမှာ အာမခံယူတယ်။ အာမခံယူပြီးတော့မှ နောက်ထပ်ရုံးချိန်းအတွက် ထပ်ချိန်းတာ။ အာမခံကတော့ နှစ်ယောက်ပေးရတယ်ဗျ။ အာမခံကြေးကတော့ သိန်းနှစ်ဆယ်ပေါ့။ နောက်ရုံးချိန်းတွေမှာ ကျနော်တို့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ ကျနော့်ရှေ့နေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရင်ဆိုင်သွားမှာပါ"
နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ထုတ် တနင်္သာရီဂျာနယ်မှာ ကလောင်အမည် မူးယစ်ဆေးအိုးရေးသားတဲ့ "မဲဆွယ် အပြုံး" သရော်စာပါ ရေးသားချက်တွေဟာ ဝန်ကြီးချုပ်ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတဲ့ စာသားတွေပါရှိတာကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က မီဒီယာဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆို တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယရုံးချိန်းကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ကို ချိန်းဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတုန်းကလည်း တနင်္သာရီဂျာနယ်မှာ ကံပေါက်သားအောင်လွင် ရေးသားတဲ့ "ငါးရံ့တစ်ကောင် ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ" ဆောင်းပါးပါ စာသားတချို့ဟာ ဒယ်ကိုကုမ္ပဏီကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ရေဖြူ တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုခံရဖူးပါတယ်။
တနင်္သာရီဂျာနယ် အမှုအယူခံ ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး ပယ်ချ
တနင်္သာရီဂျာနယ်အမှု အယူခံ မေလ ၃ ရက်နေ့ အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်
တနင်္သာရီဂျာနယ် ခရိုင်တရားရုံးကို အယူခံဝင်
သရော်စာဖော်ပြခဲ့တဲ့ တနင်္သာရီဂျာနယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်
တနသာၤရီဂျာနယ်ကို တရားစွဲထားတဲ့အမှု ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ အမိန့်ချမည်
အစိုးရက တနင်္သာရီဂျာနယ်ကို စွဲချက်တင်ဖို့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်
တနင်္သာရီဂျာနယ်ကို တရားစွဲသင့်၊ မသင့် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ ဆုံးဖြတ်မည်
တနင်္သာရီဂျာနယ်အမှု ချေဖျက်ပေးဖို့ လျှောက်ထားချက် ပယ်ချခံရ
တနင်္သာရီဂျာနယ်ကို တရားစွဲဖို့ တိုင်းအစိုးရ လျှောက်ထားမှု တရားရုံးလက်ခံ
It is just political sature .It is unnecessary to take action wasting our invaluable time for the people of Burma. That sort of cartoon is essential to promote democracy and peace.
Jan 03, 2018 04:40 AM